Wararkii ugu dambeyay ee suuqa kala iibsiga cayaartoyda %
Wararkii ugu dambeyay ee suuqa kala iibsiga cayaartoyda
By Ramzi Yare	 On Jun 27, 2019
Kooxaha Qaarada Yurub ayaa dagaal wayn ugu jira in ay suuqa kala iibsiga ka raadsadaan ciyaartoyda ay isku xoojin karaan inta aan la gaarin xili ciyaareedka cusub.
Wararka suuqa ayaa halkan idiinku soo ururisay wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo xidigaha ay doonaayaano.
Juventus ayaa weydiisatay shirkada Adidas inay dhaqaale ahaan ka caawiso saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Manchester United iyo xulka France Paul Pogba. (Corriere dello Sport)
Bayern Munich ayaa wadahadalo la yeelatay wakiilka xiddiga Barcelona Ousmane Dembele iyagoo doonaya inay u dhaqaaqaan 22 jirkaan. (Daily Mirror)
Paris Saint-Germain ayaa wadahadalo la furtay AC Milan iyagoo doonaya inay heshiis 46 milyan ginni ah kula wareegaan goolhayaha 20 jirka ah Gianluigi Donnarumma. (Daily Mail)
Manchester United ayaa ka baxday tartanka ay ugu jireen saxiixa daafaca Leicester City iyo xulka England Harry Maguire ka dib markii loo sheegay in qiimaha 26 jirkaan uu yahay 100 milyan ginni. (Daily Mirror)
Tababaraha kooxda Nice Patrick Vieira, macalinka Rangers Steven Gerrard iyo caawiyaha tababaraha Manchester City Mikel Arteta ayaa dhamaantood u sharaxan shaqada tababare ee Newcastle United. (Telegraph)
Arteta ayaa sidoo kale lagu taageeray inuu la wareego shaqada tababare ee Manchester City marka uu Pep Guardiola ka tago kooxda. (Evening Standard)
Manchester United ayaa haatan bartilmaameedsaneysa xiddig khad dhexe iyo daafac dhexe ka dib marka ay dhameystiraan saxiixa daafaca midig Aaron Wan-Bissaka. (Daily Telegraph)
Liverpool ayaa ku dhow inay la wareegto 17 jirka kooxda PEC Zwolle ee daafaca ka ciyaara Sepp van den Berg. (Telegraph).
Inter Milan ayaa isku diyaarineysa heshiiska ay kula wareegeyso weeraryahanka Manchester United Romelu Lukaku kaasoo ah heshiis amaah labo sannadood ah oo sannadkii ay bixineyso 9 milyan ginni iyadoo fursad loo siinayo inay mudadaas si joogta ah kula wareegto ciyaaryahanka haddii ay bixiso 53.8 milyan ginni. (The Guardian)
Daafaca Ajax Matthijs de Ligt ayaa aqbalay qandaraaskii Juventus iyadoo Juve iyo Ajax ay ka heshiinayaan saxiixa ciyaaryahanka 19 jirka ah ee qiimihiisa uu gaarayo 70 milyan ginni. Si Kastaba PSG ayaan weli ka quusanin saxixia xiddiga reer Holland. (The Guardian)
Manchester United ayaa la kulmi doonta wakiilka xiddiga khadka dhexe ee Portugal Bruno Fernandes oo 24 sanno jir ah iyagoo isku dayaya inay hehiis 70 milyan ginni ah kala soo wareegaan Sporting Lisbon. (O Jogo)
Joao Felix Oo Noqday Xiddiga 4-aad Ee Ugu Qaalisan suuqa kala iibsiga
RASMI: Liveprool Oo Dhamaystirtay Saxiixa xiddiga Van den Berg
Prev	Next 1 of 3,358